I-AudioNotes uhlelo olusha lokurekhoda amanothi alalelwayo kwi-Mac | Ngivela kwa-mac
Ukuthatha amanothi ku-Mac kungaba lula kakhulu uma sisebenzisa izinhlelo ezifanele futhi uma thina singafuni ukubhala noma singakwazi ukukwenza ngesikhathi esithile, sinezinhlelo zokusebenza ezimbalwa esivumela ukuthi sithathe amanothi alalelwayo. Kulokhu sine-Mac App Store uhlelo olusha olusivumela thina basebenzisi be-Mac bamba imemo yezwi ngendlela elula kakhulu futhi esheshayo, ngenkathi ivumela umsebenzisi ukuthi abe nalowo mkhiqizo owengeziwe wokwenza umsebenzi.
Izicelo zokuqopha amanothi wezwi sinenqwaba njengoba sesivele siphawule ekuqaleni kwalesi sihloko, kepha kuhle ngaso sonke isikhathi ukuzama ukwamukela izicelo ezintsha ezenza lula umsebenzi futhi ezikhiqizayo. Kulokhu sinesicelo esisha se-AudioNotes esivumela ukuthi siqophe amanothi wezwi ngokuchofoza okukodwa.
Imisebenzi iyisisekelo kakhulu futhi kufanele sicacelwe ngamanye amaphuzu alolu hlelo lokusebenza. Isikhathi sokuqoshwa kwamanothi asidluli umzuzu owodwa kuhlelo lokusebenza, ngakho-ke asikwazi ukuchitha isikhathi esiningi kakhulu siqopha kepha amanothi amaningi asheshayo kufanele asisebenzele. Ngaphezu kwalokho, amanothi esiwabhalisayo kuhlelo lokusebenza izosuswa ngokuzenzekelayo ngesonto, ngakho-ke kufanele sicace ukuthi akusona isicelo sokugcina amanothi isikhathi eside kakhulu.
Ama-AudioNotes afakwe kubha yesicelo futhi kulula kakhulu ukwenza kusebenze uma uyidinga. Kuyinto isicelo samahhala futhi njengezidingo zokuthi isebenze kwi-Mac yethu bavele basibuze ukuthi kufanele siyifakile I-OS X 10.11 noma ngaphezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » Ama-AudioNotes uhlelo olusha lokurekhoda amanothi alalelwayo kwi-Mac